तपाईको आजको राशिफल – वि.सं. २०७६ ज्येष्ठ २८ गते मङ्गलबार - Sutra TV Sutra TV
तपाईको आजको राशिफल – वि.सं. २०७६ ज्येष्ठ २८ गते मङ्गलबार
मेष : तपाईं मानसिक र शारीरिक रूपमा केही निर्बल महसुस गर्न सक्नुहुन्छ – केही आराम र पौष्टिक खानाले तपाईंको ऊर्जा लामो समयसम्म टिक्नेछ। सफलताको लागि आजको सूत्र नवीन विचारधारा र राम्रो अनुभव भएका मानिसहरूको सल्लाहमा आफ्नो पैसा राख्नु हो। आफ्नो परिवारको हितको लागि कठिन काम गर्नुहोस्। तपाईंको कार्य प्रेम र सकारात्मक दृष्टिद्वारा गरिएको हुनुपर्छ, तर लोभद्वारा होइन। तपाईं प्रेमको मूडमा हुनुहुनेछ र अवसर पनि प्रशस्त हुनेछन्। उद्योग गर्ने मान्छेसँग साझेदारीमा उद्यम गर्नुहोस्। सामाजिक साथै धार्मिक कार्यको लागि उत्कृष्ट दिन। तपाईंको जोडी आज ऊर्जा र प्रेमले भरिएको हुनेछ।
वृष : तपाईं आफैंलाई राम्रो बनिएको महसुस गराउनको लागि काम गर्ने अद्भुत दिन। आफ्नो निवासको विषयलाई लिएर लगानी गर्नु लाभदायक हुनेछ। तपाईंले संगै बसेको कसैसित तर्क नगर्नुहोस् यदि कुनै विवादास्पद मुद्दाहरू भएमा मित्रवत हल गर्नुपर्छ। प्रियसँग क्यान्डी फ्लोस् र टफी बाँट्ने कार्डमा सम्भावना देखिन्छ। तपाईं एक दिनको बिदामा जानु हुँदैछ भने चिन्ता नगर्नुहोस् | तपाईंको अनुपस्थितिमा पनि काम सजिलै चल्नेछ। कुनै अनौठो कारणले गर्दा समस्या भएमा तपाईं फर्केर आएपछि यसलाई सजिलै समाधान गर्नुहुनेछ। यात्रा लाभदायी तर महँगो हुनेछ। तपाईंको जोडीले प्रारम्भिक चरणका प्रेम र रोमान्सको रिविन्ड बटन दबाउनेछ।
मिथुन : तपाईंलाई केही मानसिक आघातको सामना गर्नु परेमा धेरै साहस र शक्तिको प्रदर्शन गर्नु आवश्यक छ। तपाईंले आफ्नो आशावादी मनोवृत्तिले सजिलै यिनीहरूलाई हटाउन सक्नुहुनेछ। एउटा नयाँ आर्थिक सम्झौता तय हुनेछ र नयाँ पैसा प्राप्त हुनेछ। तपाईंले चाहनुभएको सबै ध्यान प्राप्त गर्नुहुने आज राम्रो दिन छ | तपाईंले धेरै कुराहरू लहरै पाउनुहुनेछ र तपाईंलाई के चाहिं लिनु हो भन्ने निर्णय लिन समस्या पर्नेछ। तपाईंको समर्पित र शुद्ध प्रेममा रचनात्मक शक्तिको जादू छ। आफ्नो रिजुम पठाउन वा साक्षात्कारको लागि राम्रो दिन। तपाईंलाई मद्दत गर्ने मानिसहरूको लागि तपाईंले प्रतिबद्धता बनाउनु हुनेछ। एउटा सानो प्रयासले, आजको दिन तपाईंको वैवाहिक जीवनको सबैभन्दा राम्रो दिन बन्न सक्छ।
कर्कट : तपाईंलाई रोमाञ्चक र तनाउमुक्त राख्ने गतिविधिहरुसँग संलग्न हुनुहोस्। लामो अवधिको लाभको लागि स्टक र आपसी धन लगानीमा सिफारिस गरिन्छ। आज सल्लाह दिनुभयो भने त्यसपछि सल्लाह लिन पनि तयार हुनुहोस्। तपाईंले राम्रो व्यवहार गर्नु आवश्यक छ किनभने तपाईंको प्रेमी धेरै अप्रत्याशित मुडमा हुनेछ। आज अनुकूल दिन हो; काम गर्दा यसको उचित उपयोग गर्नुहोस्। महत्त्वपूर्ण मान्छेसँग बातचीत गर्दा तपाईंको शब्दहरू होशियारीसँग चुन्नुहोस्। ठूलो खर्चको कारण आफ्नो जोडीसँग तपाईँको झगडा हुन सक्छ।
सिंह : धेरै उत्तेजना र विस्फोटक आवेगले तपाईंको स्नायु प्रणालीमा हानि गर्न सक्छ। यसबाट बच्न आफ्नो भावनामा नियन्त्रण गर्नुहोस्। लामो अवधिको लाभको लागि स्टक र आपसी धन लगानीमा सिफारिस गरिन्छ। साथीहरूसँग साँझमा भेटघाट गर्नाले खुशीयाली साथै केही छुट्टी योजना बनाउनको लागि राम्रो हुनेछ। आफ्नो बोलीको नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नुहोस् किनकि तपाईंका कठोर शब्दले अशान्ति फैलाउँछ र आफ्नी प्रियतमासँगको सम्बन्ध बिग्रिन्छ। काममा आजको दिनलाई उत्कृष्ट बनाउन तपाईंको आन्तरिक शक्तिले पनि उत्तिकै सहयोग दिनेछ। असीम रचनात्मकता र उत्साहले तपाईंको अर्को फाइदाजनक दिन आउँछ। ठूलो खर्चको कारण आफ्नो जोडीसँग तपाईँको झगडा हुन सक्छ।
कन्या : रचनात्मक सोखले तपाईंलाई तनाउमुक्त राख्नेछ। तपाईंमा छिट्टो पैसा कमाउने इच्छा हुनेछ। परिवारको गोप्य समाचारले तपाईंलाई आश्चर्य बनाउन सक्छ। तपाईंले उनीलाई पर्याप्त ध्यान दिनुभएन भने प्रेमी दुखी हुनेछन्। साहसपूर्ण कदम र निर्णयले अनुकूल परिणाम ल्याउनेछ। आज मान्छेहरूले तपाईंको प्रशंसा गर्नेछन् जुन तपाईंले सधैं सुन्न चाहनु हुन्थ्यो। आज तपाईं वा तपाईंको जोडीलाई ओछ्यानमा चोट लाग्न सक्छ, त्यसैले एक-अर्कासँग नम्र हुनुहोस्।
तुला : शारीरिक पीडा र तनाउ सम्बन्धित समस्यालाई नकार्न सकिंदैन। तपाईँको आशा अनुसार पैसाको लाभ हुनेछैन। अनपेक्षित अतिथिले साँझ तपाईंको घरमा भीड लगाउनेछन्। निष्पक्ष र उदार प्रेमको लागि पुरस्कृत हुन सक्नुहुनेछ। महत्वपूर्ण मान्छेसँग अन्तरक्रिया गर्नाले तपाईंलाई राम्रो विचार र योजना ल्याउनेछ। तपाईं परिस्थितिबाट भाग्नु भयो भने त्यसले तपाईंलाई साह्रै नराम्रो तरिकाले पछ्याई रहनेछ। तपाईं लामो समयबाट श्रापित महसुस गर्नु हुँदै थियो भने, आज तपाईं आशिष पाएको महसुस गर्नु हुनेछ।
वृश्चिक : खुशीको समाचार प्राप्त हुन सक्छ। “आफ्नो खर्च नियन्त्रण गर्नुहोस् र आज आफ्नो खर्च गर्नमा त्यति उदार हुने प्रयास नगर्नुहोस्।” आवश्यक परेमा मित्रहरूले तपाईंको सहायता गर्नेछन्। रोमान्सको लागि धेरै राम्रो दिन होइन किनकि तपाईंले साँचो प्रेम पाउन सक्नु हुनेछैन। तपाईंले आज आफ्नो काममा प्रगति देख्न सक्नु हुनेछ। तपाईंको प्रतिस्पर्धी प्रकृतिले तपाईं प्रवेश गरेको कुनै पनि प्रतियोगिता जित्न सक्षम गराउनेछ। आज, तपाईं र तपाईंको जोडी बीचको झगडामा कुनै सुन्दर स्मृतिको कारण विराम आउन सक्छ। त्यसैले, गरम तर्कको समयमा पुरानो सुन्दर दिनको सम्झना गर्न नबिर्सिनुहोस्।
धनु : आफैलाई सुहाउँदो र राम्रो राख्न बढी क्यालोरी भएको आहारबाट जोगिनुहोस्। अचानक धनको लाभ हुनाले तपाईंको बिल र तत्काल खर्च पूरा गर्नेछ। घरेलु जीवन शान्तिपूर्ण र प्यारो हुनेछ। तपाईंको प्रेम सम्बन्ध आज राम्रो हुने छैन। बढ्दै गरेको मागको लाभ मिल्नाले व्यापारीहरु र व्यवसायीहरूको लागि राम्रो दिन। पुरानो कुनै मित्रले तपाईंसँग सम्पर्क गर्नेछ र यस दिनलाई अविस्मरणीय दिन बनाउने सम्भावना छ। आफ्नो जोडीको स्वास्थ्य केही खराब हुन सक्छ।
मकर : तपाईँको स्वास्थ्यमा समस्या भएकोले एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यमा जान असमर्थ हुनाले केही बाधाहरूको सामना गर्नु पर्ने हुन सक्छ। तर आफुलाई यसबाट छुटाउन आफ्नो तर्कको प्रयोग गर्नुहोस्। बुद्धिमानी तरीकाले निवेश गर्नाले मात्र लाभ हुनेछ – त्यसैले तपाईंले दुखले कमाएका पैसा राम्रो ठाउँमा निवेश गर्नु हुँदैछ भन्ने निश्चित गर्नुहोस्। साथी तथा आफन्तहरूलाई आफ्नो राय जबरजस्ती नथोप्नुहोस्, किनकि यो तपाईंको नहुन सक्छ र तपाईंदेखि तिनीहरू अनावश्यक रूपमा रिसाउन सक्छन्। प्रेमी जीवन थोरै कठिन हुन सक्छ। नयाँ साझेदारी आज कष्टपूर्ण हुनेछ। असीम रचनात्मकता र उत्साहले तपाईंको अर्को फाइदाजनक दिन आउँछ। आज आफ्नो जोडीले कठिन परिस्थितिमा तपाईंलाई सहयोग गर्नमा धेरै चासो नदेखाउन सक्छन्।
कुम्भ : तपाईंको मन हालका घटनाहरूले विचलित गर्नेछन्। ध्यान र योग आध्यात्मिक साथै भौतिक लाभको लागि लाभदायी साबित हुनेछन्। तपाईंले धेरै अनपेक्षित स्रोतहरूको मार्फत कमाउने सम्भावना छ। अरूलाई अपमान नगर्ने प्रयास गर्नुहोस् र आफ्नो परिवारको आवश्यकता अनुसारको बन्नुहोस्। “आज, तपाईंले आफ्नी प्रियतमाले तपाईंलाई कति प्रेम गर्छिन भन्ने महसुस गर्नुहुनेछ।” उद्योग गर्ने मान्छेसँग साझेदारीमा उद्यम गर्नुहोस्। आज तनाउले भरिएको दिन हुनेछ, नजिकका कर्मचारीहरूसँग धेरै मतभेद आई पर्न सक्छ। आज आफ्नो जोडीसँग शारीरिक सम्बन्ध सबै भन्दा राम्रो हुनेछ।
मीन : कठिनाइ बुन्ने र तिनीहरूलाई बढाउने तपाईंको बानीले तपाईंको नैतिक फाइबर कमजोर हुन सक्छ। दिनको पछिल्लो भागमा वित्तीय सुधार हुनेछ। सामाजिक कार्यक्रमहरू प्रभावशाली र महत्त्वपूर्ण मान्छेसँग आफ्नो तालमेल सुधार गर्न सही मौका हुनेछन्। आफ्नी प्रियतमालाई बुझ्ने गर्नुहोस्। व्यापारका नयाँ विचारहरूको लागि सकारात्मक र चाँडो प्रतिक्रिया गर्नुहोस्। तिनीहरू तपाईंको पक्षमा हुनेछन्। तपाईंले मेहनत गरेर वास्तविकतामा परिवर्तित गर्नु आवश्यक छ जुन तपाईंको व्यापारमा चासो राख्न महत्वपूर्ण छ। काममा आफ्नो रुचि बनाइराख्न आफुलाई शान्त राख्नुहोस्। कुनै तर्कमा परेर कठोर टिप्पणी दिनबाट बच्नुहोस्। तपाईं र तपाईंको जोडीलाई आज अचम्मको समाचार प्राप्त हुन सक्छ।
दैनिक राशिफल वि.सं. २०७६ भदौ २७ गते शुक्रवार, ई.सं. २०१९ सेप्टेम्बर १३
दैनिक राशिफल वि.सं. २०७६ भदौ २६ गते बिहीवार, ई.सं. २०१९ सेप्टेम्बर १२
दैनिक राशिफल वि.सं. २०७६ भदौ २५ गते बुधवार, ई.सं. २०१९ सेप्टेम्बर ११
दैनिक राशिफल वि.सं. २०७६ भदौ २३ गते सोमवार, ई.सं. २०१९ सेप्टेम्बर ९